मुख्य खबर | गृहपृष्ठ
मुख्य खबर, समाचार 25 views
जेठ १२, काठमाडौं । यस वर्षको सगरमाथा आरोहणबाट रू. ३६ करोड १४ लाख ९८ हजार ३ सय २१ रोयल्टी सङ्कलन भएको छ । यसवर्ष गत वैशाख ३० गतेदेखि शुरु भएको वसन्त ऋतुको आरोहण जेठ ११ गते सम्पन्न भएको हो । य...	बिस्तृतमा
जेठ ११, काठमाडौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुले बोल्नेक्रम सकिएको छ । सङ्घीय संसदमा बुधवारदेखि शुक्रवारसम्मको छलफलमा सांसदहरुले आफ्नो धारणा राखिसकेपछि आइतव...	बिस्तृतमा
मुख्य खबर, समाचार 124 views
जेठ ११, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले पाँच वर्षपछि बाध्यताले रोजगारीमा नेपाली विदेश जान नपर्ने तरीकाले काम भइरहेको बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक...	बिस्तृतमा
मुख्य खबर, समाचार 50 views
जेठ ११, काठमाडौं । नीति तथा कार्यक्रम शब्दमा राम्रो देखिए पनि त्यसको प्रतिफल कार्यान्वयनपछि मात्र जनताले अनुभूति गर्न सक्ने भन्दै राष्ट्रियसभाका अधिकांश सदस्यले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति त...	बिस्तृतमा
बजार, मुख्य खबर 97 views
जेठ ११, काठमाडौं (अस) । सातामा सुनको मूल्य रू. ५ सय बढेको थियो । आइतवार रू. ५८ हजार ७ सयमा किनबेच भएको सुन स्थानीय बस्तु बजारको अन्तिम दिन शुक्रवार बढेर रू. ५९ हजार २ सयमा किनबेच भएको हो । ड...	बिस्तृतमा
ओरालो लाग्यो शेयरबजार, परिसूचकसँगै बजार पूँजीकरण घट्यो
मुख्य खबर, लगानी 108 views
जेठ ११, काठमाडौं (अस) । गत साताको कारोबारमा परिसूचक २१ दशमलव ४३ अङ्क घटेको छ । साताको पहिलो दिनदेखि निरन्तर ओरालो लागेको बजार अन्तिम दिनसम्म घटिरह्यो । अघिल्लो साताको अन्तिम दिन १ हजार ३ सय...	बिस्तृतमा
मुख्य खबर, समाचार 54 views
जेठ ११, काठमाडौं । फूलको आँखामा फूलै संसार, काँडाको आँखामा काडै संसार …। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङले माथिका चर्चित गीतका हरफसित सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई...	बिस्तृतमा
३५ % हकप्रद शेयर जारी गर्ने तयारीमा रहेको सिद्धार्थ इन्स्योेरेन्सको आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण :
मुख्य खबर, लगानी 78 views
कम्पनीले चालू आव चैत मसान्तसम्मको त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार रू. १८ करोड ४ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा २८ दशमलव ८२ प्रतिशतले बढी हो । कम्पनीले रू. ३० करोड ९ लाख आम्दा...	बिस्तृतमा
मुख्य खबर, समाचार 420 views
पोखरा । प्रदेश नम्बर ४ को विकाससँग जोडिएको कालीगण्डकी कोरिडोर (बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजना)को कामले तीव्रता पाएको छ । नेपाल–चीन सीमाक्षेत्र कोरलासम्म जोडिने उक्त बाटो निर्माणका लागि ११ ओटा न...	बिस्तृतमा
वीरगञ्ज । बर्दियाको जब्दीघाटस्थित बबई नदीमा निर्माण गरिएको पुल भासिनुमा सडक विभाग जिम्मेवार रहेको दाबी निर्माण कम्पनीले गरेको छ । निर्माण कम्पनी पप्पु कन्ष्ट्रक्शनका प्रबन्ध निर्देशक सुमित र...	बिस्तृतमा